Zvose Zvaunoda Kuti Uzive Nezve WhatsApp Voicemail Scam - Mazano kubva kuSemalt Expert
Vashandisi veIndaneti vanotarisana nekunyengedza kana kuedza kuedza. Rimwe rinorwisa malware ndiro WhatsApp voicemail scam. Pane email iyo inoti ine voicemail kubva kune WhatsApp. Iko email inoshusha nokuti ine zvigadziro zve scam malware. Iyo email inotarirwa nevasingashandisi vashandisi ve WhatsApp uye emaimeri - attrezzatura palestra prezzi. Iyo email ine "Play". Vashandi veIndaneti vanorayirwa kuti vateerere voicemail kuburikidza nebhokisi re "Play". Kana munhu anoshandisa bhodhi "Play", iye anotungamirirwa kune webhusaiti yakawanda. Ivan Konovalov, the Semalt Mutengi Achibudirira Mutevedzeri, anoratidza kuti chinangwa chegurogiramu ndechokunyengedza vashandisi veIndaneti mukukandira malware. Izvo zvinonyadzisira zvinokanganisa kushanda kwekombiyuta kana foni yevashandi veIndaneti.
Inowanikwa muIndaneti yakaoma nokuti inonyanya kuipa malware iyo yakadzingwa inotsanangurwa nemichina inoshandiswa kuwana internet. Vashandisi vanogona kuwana mavhisi epaIndaneti vachishandisa ma-smartphone vanozogamuchira malware akasiyana kune vashandisi vane tablet, laptop, kana ma-desktop.
Vashandisi vanonyanya kutarisana ne-malware scam vanoshandisa Google Android Operating System. The WhatsApp voicemail scam inotungamirira vashandisi vepa internet kuti vakwanise kubudisa internet..Apo iyo link inodhindwa, faira inonzi "Browser 6.5" inotorwa. Iyo kuiswa kunotanga apo munhu anoshandisa "Bvumirana" bhatani iyo inoratidzwa pahwindo refoni kana kombiyuta. Ikosaiti yekombiyuta inotumira mameseji kumitambo yepamutengo yefoni yevashandisi. Ivo vanobva vapomerwa mabasa ose anopiwa mushure mokutumira mameseji. The WhatsApp scam inoenderera mberi mushure mekuiswa kwe "Browser 6.5." Izvi ndechokuti vashandi vanoedza kuisa mamwe malware muchengeti yevanoshandisa internet.
Indaneti hackers vanofarirawo majeri ejeribroken iPhone. Izvi zvinowedzera kushungurudzwa kwevashandi vepaIndaneti nokuti vanogona kushandiswa kuisa mapurogiramu asingagoni kuwanikwa muApp App App. Vashandi veIndaneti vane maPhones asina jeri vanochengetedzwa vanochengetedzwa kubva kune scam ye malware. Idziviriro ndeyekuti maofisi e-non-jailbroken iPhone anopa kushaya simba kwakanaka kuburikidza nekuedza kwekugadzirisa.
Vashandisi veIpps desktop madivayiri ikozvino vanotungamirirwa kune imwe nzvimbo yepaIndaneti inoratidza kuti chirongwa che malware hachienderani neApp OS OS. Vashandisi veApple mobile, laptop, uye madivashoni zvepakombiyuta vanodzivirirwa kubva ku-malware scam. Zvisinei, zvichiri kukosha kuti vashandisi veIndaneti varege kubva pakutsvaga zvichemo "Play" kana "Gamuchira". Zvimwe zvingwarira zvinofanira kutorwa nokuti kuedza kushandiswa kwemafoni efoni kunoramba kuchikura nekuda kwekufambira mberi kwekombiyuta yemagetsi. Pane chivimbo chakakwana chokuti miitiro yekutsvaga kwemazuva anotevera ichave yakaoma kunzwisisa kune mamwe madivayiri e-internet ayo haasati agadziriswa ne scam malware.
Vakawanda vashandisi vekutengesa vashandurwa ne WhatsApp voicemail scam. Vaya vanobatwa ne-scam scam vanokurudzirwa kugovana ruzivo nemamwe email uye WhatsApp vashandi. Mashoko akakodzera kushandurana pakati pevashandisi veIndaneti inokosha mukudzivirira kuwanikwa kwepakuvhura kwepamusoro kwekutsvaga kana kushaya malware.